Man City, Tottenham, Real Madrid, AC Milan, Inter Milan, Juventus iyo Guud ahaan kulammada caawa laga ciyaari doono horyaallada waa weyn ee qaaradda Yurub - Idman news
(Yurub) 21 Abriil 2021. Kulammo ka tirsan shanta horyaal ee ugu waa weyn qaaradda Yurub ayaa caawa la ciyaari doonaa, waxaana kooxo waa weyn oo ciyaarti doono kuwaasoo taageerayaashu ay indhaha ku hayaan.
Horyaalka Premier League ayaa laga ciyaari doonaa illaa iyo labo kulan, waxaana kulammadaasi ay kala yihiin Tottenham Hotspur oo soo dhoweynaysa Southampton iyo Manchester City oo u safreysa Aston Villa.
Dhanka kale kooxda kaalinta labaad kaga jirta horyaalka Spain ee Real Madrid ayaa caawa booqanaysa Cadiz, waxaana ay doonayaan inay guul gaaraan si ay dhibcaha ula mid noqdaan hoggaamineysa horyaalka La Liga ee Atletico Madrid.
Hoggaamiyeyaasha horyaalka Serie A ee Inter Milan ayaa caawa booqanaya Spezia, AC Milan ayaa caawa fiidkii soo dhoweynaysa Sassuolo, halka Juventus ay la ciyaareyso oo ay marti gelinayso Parma.
Haddaba halkaan hoose ka eeg guud ahaan kulammada caawa laga ciyaari doono horyaallada ugu waa weyn Yurub & saacadaha ay soo geli doonaan xilliga geeska Afrika:-
08:00 Fiidnimo Tottenham Hotspur vs Southampton
10:15 Habeennimo Aston Villa vs Manchester City
08:00 Fiidnimo Levante vs Sevilla
08:00 Fiidnimo Osasuna vs Valencia
09:00 Habeennimo Real Betis vs Athletic Bilbao
10:00 Habeennimo Deportivo Alaves vs Villarreal
10:00 Habeennimo Elche vs Real Valladolid
11:00 Habeennimo Cadiz vs Real Madrid
07:30 Fiidnimo AC Milan vs Sassuolo
09:45 Habeennimo Bologna vs Torino
09:45 Habeennimo Crotone vs Sampdoria
09:45 Habeennimo Genoa vs Benevento
09:45 Habeennimo Juventus vs Parma
09:45 Habeennimo Spezia vs Inter
09:45 Habeennimo Udinese vs Cagliari
Dib ayaa loo dhigay ciyaartaan: Hertha Berlin vs Freiburg
09:30 Habeennimo Borussia Dortmund vs Union Berlin
09:30 Habeennimo Hoffenheim vs Borussia Moenchengladbach
09:30 Habeennimo VfB Stuttgart vs Wolfsburg
09:30 Habeennimo Werder Bremen vs Mainz
Previous Zidane oo si RASMI ah u shaaciyey liiska 20-ka ciyaaryahan ee Real Madrid uu kala qeyb galayo kulanka Cadiz – Gool FM
Next Kaddib go’aankii ay kooxaha England uga go’een Super League, aas-aasayaasha tartankan oo go’aan cad ka gaaray fikraddooda… (Miyuu burburay ESL?)
Dad kamudaa haraadayay dilkii Sheekh Cali Dheere oo laxabadeeyay
Dad kamudaa haraadayay dilkii Sheekh Cali Dheere oo laxabadeeyay May 13, 2021